Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Teeth Grinding သွားကြိတ်ခြင်း
Dr, I would like to know about Grinding Teeth. What is cause by? And how can I do for not grinding teeth when sleeping deeply in night time. How can I protect not for not to grinding teeth?
အိပ်နေတုံး နေ့ဖြစ်ဖြစ် ညဖြစ်ဖြစ် သိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် မသိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် သွားကြိတ်တာကို ပြောတာပါ။ Bruxism လို့လဲ ဆေးစာမှာ ခေါ်တယ်။
ဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်တွေက တယောက်ယူဆတာကို နောက်တယော်က သဘောတူချင်မှ တူကြတယ်။ စိတ်ဖိအားများတာ၊ အစားအသောက်၊ အိပ်တဲ့အနေအထား၊ စတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတာကတော့ များတယ်။
ကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ရော သွားကျန်းမာရေပါ ဆိုင်တယ်။ အကြောင်းရင် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ဖိအားကို အရင်ဆုံး သတ္တုချတယ်။ သွားဆရာဝန်ကတော့ သွားနေ တခုနဲ့တခု အနေမကျလို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောမယ်။ ကလေးတွေလဲ ၁၅-၃ဝ% ဖြစ်တာဘဲ။ အကျင့်လိုပါနေတာလဲ ရှိတယ်။ ငယ်သွားရှိတုံးအကျင့်ရှိတာ သိပ်စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။
Reflex တုံ့ပြန်မှု မဟုတ်ဘူး Habit အကျင့်လို့ ထောက်ပြတာ ရှိတယ်။ အိပ်ရေး မမှန်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်ရတယ်။ အရက်၊ Antidepressants စိတ်မကျဆေးတွေကနေ ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။ နာတာရှည် ဖြစ်နေသူတွေမှာ သွားကိုလာ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ကလေးတွေမှာ အအေးမိတာ၊ ပိုးဝင်တာတွေကြောင့် ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Dental Night Mouth Guard, splint called the NTI-tss ခေါ်တဲ့ ကရိယာသုံးခိုင်းတယ်။
• မျက်နှာမှာ ရေနွေးပူဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်ကပ်ပေးပါ။
• ခေါင်းအုံးကို ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းနေရာအောက်ကမြှင့်ထားပြီးအိပ်ပါ။